မြန်မာနိုင်ငံ | မြန်မာနိုင်ငံ ရှိ မှ အရောင်း နဲ့ပက်သက်တဲ့အလုပ်အကိုင်များ | MyJobs
Result page 1 for မြန်မာနိုင်ငံ ရှိ မှ အရောင်း နဲ့ပက်သက်တဲ့အလုပ်အကိုင်များ
အလုပ် 55 ခုကို တွေ့ရှိပါတယ်။
ရန်ကုန် အချိန်ပိုင်းအလုပ်အမျိုုးအစား $ လျှို့၀ှက်အပ်သော
လုပ်ငန်းအမျိုးအစား : အရောင်း နဲ့ပက်သက်တဲ့အလုပ်အကိုင်များ
ရန်ကုန် အချိန်ပိုင်းအလုပ်အမျိုုးအစား MMK Commission Only
လွန်ခဲ့သော 16 နာရီ က
Stanol Myanmar Co.,Ltd
လွန်ခဲ့သော4ရက် က
A high level of business acumen and commercial understanding withinasales environment · Demonstrated experience leading, developing, and managing performance
မန္တလေး အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား MMK 400,000 - 600,000
Business development managers playacrucial role in the success of an organization. These professionals generate new sales leads, negotiate client pricing, and forecast sales revenue, all to support one of the most important business development manager responsibilities — helping organizations maximize their profits.
Reginal Sales Manager - Males/Female (1) post
မန္တလေး အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား MMK 600,000 - 800,000
This position has the ability to control significant decisions, recruit new customers, and increase sales by improving employee engagement techniques.
FMCG Products များကို အောင်မြင်စွာ Market ထိုးဖောက်ရန်အတွက် ခေါ်ယူခြင်း
Preorder Sales Representative (သာကေတ၊ ဒေါပုံ၊ ပုဇွန်တောင်၊ မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်)အမြန်အလိုရှိသည်
I.P. One (Myanmar) Company Limited
Job Summary To provide full operational activities of retails channel’s sales pre-orders and coordinate with sales admin. Responsible for acquiring new customers and maintaining good relationships with both potential and existing customers within assigned territory. To build trust and act as support for prospects, ensuring they lead to potential
SAP & DMS system data supporting to sales function. Performance calculation related with sales people as well as customer. Monthly claim process (Trade rebate program)
Sales Executive （Sales）
Assist sales manager to achieve the sales target and implement the promotion plan, Translation, communication and coordination
Preorder Sales Representative (အလုံ၊ ဒဂုံ၊ တာမွေ၊ ကမာရွတ်၊ ဗဟန်းမြိုနယ်) အမြန်အလိုရှိသည်
Preorder Sales Representative (မင်္ဂလာဒုံ၊ ထောက်ကြံ့မြိုနယ်) အမြန်အလိုရှိသည်
Job Summary To provide full operational activities of retails channel’s sales pre-orders and coordinate with sales asmin. Responsible for acquiring new customers and maintaining good relationships with both potential and existing customers within assigned territory. To build trust and act as support for prospects, ensuring they lead to potenti ...
Sale Manager –Male/ Female (1) Post – (Noodle) (Mandalay)
5 years’ experience in related field. Self-confident and motivated manager who can be targeted planning and resulted oriented manager is welcomed to sell noodle.
Sale Manager –Male/ Female (1) Post – (Noodle) (Yangon)
မန္တလေး အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား MMK 100,000 - 200,000
To Sales our products to the retail shops.
အရောင်း နဲ့ပက်သက်တဲ့အလုပ်အကိုင်များ 54
စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း၊ ငါးလုပ်ငန်းနှင့် သစ်တောလုပ်ငန်း7မော်တော်ယာဉ်နှင့် လေကြောင်းလုပ်ငန်း2ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း2ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်း4နည်းပညာနှင့် ဆက်သွယ်‌ရေးလုပ်ငန်း6ကုန်ထုတ်လုပ်မှုနှင့် သိုလှောင်လုပ်ငန်း 11 လက်လီးအရောင်း /အ၀ယ်လုပ်ငန်း၊ ဖက်ရှင် နှင့် လူသုံးကုန် စားသောက်ကုန်လုပ်ငန်း 20 သင်္ဘောလိုင်းနှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်း 2
မန္တလေး 17 ရန်ကုန် 35 မြန်မာပြည်အတွင်း 2
Expats Preferred 19 Repats Preferred 6